သင်ဒီမှာပါ: Home / တိုက်စားမှု Solutions / မြက်အစင်းကျားများနှင့်သစ်ပင်များနှင့်အတူတိုက်စားမှု Fight
07 / 05 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 29 မှတ်ချက်
ပေါ်ပင် Gullies - သူတို့ကအပေါ်သွားရုံအနည်းငယ်သာလိုင်းများဖြစ်ကြပြီးထဲကမိုး မူတည်.
As I was reading this report about erosion, I thought to myself that this information was absolutely irrelevant to what I’m doing as the editor of အဆိုပါ Planet ကို Fixer မဂ္ဂဇင်း။ သူတို့ကသူတို့တိုက်စားမှုပေမယ့်ငါ Planet ကိုကမ္ဘာမြေအဘို့အဖြေတစ်ခုအဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ကြောင့်တိကျတဲ့ဘာမျှအများကြီးဆိုလိုတာကမြေပြင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုအကြောင်းကို, ပြောင်းဖူးခါးပတ်ပြည်နယ်များအကြောင်းပြောနေတာခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်ရုတ်တရက်အစီရင်ခံစာရဲ့အဆုံးမှာ, နိဂုံးပိုင်း:
gullies တစ်မိုဃ်းရွာပြီးမှအလျင်အမြန်ပြန်ပေါ်လာပြန်ပြီး (နှင့်နေရောင်နှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွား) ထိုလမ်းကြောင်းများဖြစ်ကြသည်
နှင့်မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးထဲတွင်ရှိနေပါသည် ... ငါ့ကိုမယုံ!
အရိုးရှင်းဆုံးပေမယ့်အများဆုံးမြင့်မားထိရောက်သောအလေ့အကျင့်သီးနှံလယ်ကွင်း၏အနားအတွင်းသို့မဟုတ်တစ်လျှောက်မြက်သို့မဟုတ်သစ်ပင် strips တွေစိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကလယ်ပြင်အစွန်းချွတ်ပြေးအနည်အနှစ်များနှင့်ညစ်ညမ်းထွက် filter ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြက် strips တွေ filter ကို strips တွေဟုခေါ်ကြသည်
တစ်စီးမှလာမယ့်ကိုစိုက်မြက်သို့မဟုတ်သစ်ပင် strips တွေ riparian ကြားခံဟုခေါ်ကြသည်။ Riparian ကြားခံကစမ်းချောင်းသို့မဟုတ်မြောင်းထဲသို့ဝင်ရုံမရောက်မီ filtering ကိုမျောပါခြင်းမှာရေများအတွက်ကာကွယ်ရေးနောက်ဆုံးလိုင်းများမှာ
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်ပုံ strips တွေတစ် slope field ရဲ့ကောက်ကြောင်းတလျှောက်တွင်စိုက်ပျိုးနေကြသည်။ ပုံ strips တွေနှေးကွေးခြင်းနှင့်ကလယ်ကွင်းပြင်ကိုဖြတ်ပြီးစီးဆင်းအဖြစ်ရေထဲကမျောပါခြင်းမှာနှင့် filter ကိုရွှံ့နဲ့ညစ်ညမ်းလျော့။
အဲဒီ Stats ကတော့မှာကြည့်ပါ
အနည်အနှစ်များရာခိုင်နှုန်း 41 မှ 100
ယင်းမျောပါခြင်းမှာရေရာခိုင်နှုန်းကို9မှ 100
အဆိုပါ phosphorus ကိုရာခိုင်နှုန်း 27 မှ 96
အဆိုပါနိုက်ထရိတ်၏ရာခိုင်နှုန်းကို7မှ 100
နှစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များကိုစမ်းသပ်လျက်ရှိသည်။ တဦးတည်း sloping လယ်ကွင်း၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိပြီးမြက် strips တွေထဲသို့ cropland ၏ 10 ရာခိုင်နှုန်းကိုပြောင်းပေးပါတယ်။ ဒုတိယပြောင်းလဲပုံမြက် strips တွေသို့ 10 ရာခိုင်နှုန်းကိုထည့်လေ့မရှိ။
Article Source – Loosing မြေပြင် - အပြည့်အဝအစီရင်ခံစာ
Documents – တိုက်စားမှုပုဒ်မ - Planet ကို Fixer ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်
Pictures Talk! – အနည်အနှစ်များ၏တိုက်စားမှု
ဒီဗီဒီယိုကိုဂရုတစိုက် Watch ။ ဒါဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်အများစုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ... အခြေအနေကဖော်ထုတ်နှင့်မည်သို့ဆိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်မယ့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အဘို့သင့်မျက်စိကြားမှာ flash မည်!